युगसम्बाद साप्ताहिक - “जनताले धेरै कुरा बुझेका रहेछन्” - कृष्णप्रसाद दाहाल
“जनताले धेरै कुरा बुझेका रहेछन्” - कृष्णप्रसाद दाहाल
Tuesday, 12.19.2017, 01:09pm (GMT+5.5)
० यही ठाउँबाट राजनीति गरेका राप्रपा अध्यक्ष कमल थापालाई तपाईंले तीन पटक हराउनु भयो । के थिए तपाईंले जित्नुका कारण ?
हो तपाईंले भने जस्तै हिजै लामो समय जितेका कमल थापाले हारे । एक, जनताले परिर्वतन चाहेका थिए । दोस्रो, लामो समयसम्म रहिरहेको संक्रमण अत्य गर्नु थियो । तेस्रो, मैले ४० वर्ष यही क्षेत्रमा बसेर गरेको सेवाको मत पनि हो यो । यसरी मेरो लगन, राष्ट्रिय एजेण्डा र जनताको एमाले र वाम गठबन्धन प्रतिको विश्वास सबै कुराले काम गरेको छ ।
० चुनावमा कस्ता चुनौती झेल्नुभयो ?
० हेभीवेट ठानिएका राप्रपा अध्यक्षसँग लड्दा त्यो ठूलो पदले कत्तिको थिच्यो चुनावको समयमा ?
त्यस्तो केही भएन । किनकि उहाँ कहिलेकाहिँ आउने नेता, म सधैं यही बसेर जनताको काम गरेको मान्छे । जनताले उहाँलाई टाढाबाट आउनु भएको भनेर सम्मान गरे, मलाई भोट दिए ।
० चुनाव त जित्नु भो, अब तपाईंलाई भोट दिएका जनताको मतको कदर गर्ने योजना के के छन् ?
० नतिजा आएपछि कमल थापाले तपाईंलाई वधाई दिनु भएन ?
त्यसरी भेट नै गरेर वधाई भन्न आउनु त भएन तर, ट्वीट मार्फत वधाई भन्नुभएको पढेको थिएँ । यो सद्भावको लागि उहाँलाई पनि आभार ब्यक्त गर्न चाहन्छु । अघिपछि भेटिन्थ्यौं तर हामी चुनाव प्रचारका क्रममा पनि भेट भएनौं । हामीले लोकतन्त्रको मर्म अनुसार बाहेक एक अर्कोलाई आक्षेप लगाउने काम गरेनौं । साँच्चै भन्छु, कुनै तिक्तता बिना नै हामी चुनावमा थियांै । उहाँले ३५ हजार भोट ल्याउनु भयो मैले ४० हजार ल्याएँ । हामीले कहिल्यै एक अर्काको अनुहारमा हिलो छ्याप्ने काम गरेनौं ।
जसले मलाई मत दिएर जिताउनु भयो म उहाँहरुको घरदैलोमा धन्यवाद दिन हिंडेको छु । मसँग चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहनु भएका कमल थापाजीलाई पनि तपाईंको मिडिया मार्फत मित्रतापूर्ण प्रतिस्पर्धाका लागि र सद्भावका लागि धन्यवाद दिन्छु । मेरो जीत स्थिर सरकारको लागि हो, त्यस अर्थमा मैले जित्दा उहाँ पनि खुसी नै हुनुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु ।